होची तर प्रभावशाली ‘सलिना’ » Mero Khel
१८,श्रावण,२०७८ ( Monday, August 2, 2021 ) 10: 31 am
MeroKhelPosted on १५,असार,२०७८ June 29, 2021 १ महिना पहिले
काठमाडौं । ‘तिमि यति होची छौ भलिबलका लागि कम्तिमा पाँच फुट भन्दा अग्लो हाइट चाहिन्छ । तिमिले भलिबल कसरी खेल्छौ ? नेटबाट बल कटाउन सक्छौ त ? भन्दै मेरो खिल्ली उँडाउने मान्छेहरु मलाई अझै पनि याद छ । मैले भलिबल खेल्छु भन्दा मेरो बोलिमा कत्तिपनि विश्वास नगरी मलाई उल्टै होच्याउने व्यक्तिहरुले जब मेरो खेल एकपछि अर्को देख्दै गए, तब उनीहरुले मेरो हाइट भन्दा आफ्नो सोंच सानो रहेको महसुस गर्दै गए’,हास्दै सुनाउँछिन् नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमकी ४ फिट ११ इन्च हाइट भएकी महत्वपूर्ण खेलाडी सलिना श्रेष्ठ ।
हुन त भलिबल भन्ने बित्तिकै सबैको दिमागमा सामान्यभन्दा अग्लो कदको खेलाडीको चित्र आउँछ । सायद यसै कारण सलिनाको सानो उचाईले उनको भलिबल खेल्ने रुची प्रति अधिकांश ब्यक्तिले उनीमाथि शंका गर्नु स्वभाविक पनि थियो ।
तर, भलिबल खेल्नको लागि कद महत्वपूर्ण कडी भएपनि सायद सलिना विश्व भलिबलमा सबैभन्दा कम कद भएकी खेलाडी हुन् । तर उनको कदले उनको भलिबल प्रतिको रुचीलाइ कहिल्यै थाक्न दिएन र निरन्तर मिहिनेत र अभ्यासको बलबुतामा लिबेरो पोजिसनबाट खेल्ने सलिना अहिले नेपाली महिला भलिबलको एक महतवपूर्ण खेलाडीको रुपमा परिचित छिन् ।
जब जब उनी क्लब स्तरीय होस् वा अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा कोर्टमा उत्रिन्छिन्,उनको नामको हुटिङ्गले खेल स्थल गुन्जयमान हुने गरेको छ । नहोस् पनि किन, फुच्ची सलिना आफ्नो चतुर खेल शैलीले दर्शकलाई मनमोहित बनाउने गर्छिन् ।
भलिबल खेलाडीका लागि हाइट अवश्य पनि एक अतिरिक्त पक्ष हो तर हाइट सबैथोक होइन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बन्न सफल भएकी छिन् ४दशमलब ११ इन्च हाइट भएकी सलिना ।
‘हाइट चाहिदैन भन्ने होइन,भलिबल खेल्न हाइट निकै आवश्यक छ तर म लिबेरो पोजिसनबाट खेल्ने भएकोले यसमा आफू कत्तिको चनाखो र फुर्तिलो छु भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ’,सलिना भन्छिन,‘त्यसैले यदि सानो हाइटकै कारण भलिबल खेल्न हिच्कीचाउने कोही हुनुहुन्छ भने आफ्नो रुची नमारि भलिबल खेल्न आग्रह गर्छु ।’
‘हाइट बिना पनि भलिबल खेल्न सकिन्छ भन्ने म आफै एक ज्वलन्त उदाहरया हुँ, त्यसैले म सबैलाई भलिबल खेल्न हाइट नै चाहिन्छ भन्न सक्दिन तर हाइट भए सजिलो अवश्य हुन्छ ।’
करिब ९ वर्षदेखी निरन्तर भलिबल खेल्दै आएकी सलिना विगत तीन वर्षदेखी राष्ट्रिय टिमकी नियमित सदस्य समेत रहँदै आएकी छिन् । यिनै सलिनाको आजभोलिको दैनिकि भने आगामी अगष्ट २९ देखि सेप्टेम्बर ५ तारिख अर्थात् भाद्र १३ गते देखि २० गतेसम्म फिलिपिन्समा आयोजना हुने एशियन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको तयारीमा ब्यस्त छ ।
सलिना एशियन च्याम्पियनसिपका लागि नेपाल भलिबल संघले असार १ गतेदेखी संचालन गरेको राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणको बिहानी र बेलुकी सत्रमा सहभागि हुन्छिन् अनि आफ्नो खेलमा थप निखारता ल्याउने र एशिएन च्याम्पियनसिपमा उच्च प्रदर्शनसहित देशको साख जोगाउने मनोबलले तयारीमा जुटेकी छिन् ।
नेपालमा भलिबल भन्ने बित्तिकै अग्रस्थानमा आउने नाम हो, न्यु डायमण्ड स्पोर्ट्स एकेडेमी । खेल्नकै लागि भनेर विभागिय क्लबमा जागिर खाएका खेलाडीलाई समेत न्यु डायमण्डका खेलाडीले आच्छु आच्छु पार्दै आएको धेरै उदाहरण हामि माझ रहि आएको छ । नेपालमा हुने अधिशांक ठूला भलिबल प्रतियोगिताको फाइनसम्म पुग्ने र उपाधि जित्ने क्लबमा समेत न्यु डायमण्डको बर्चस्व छ ।
यसै एकेडेमीको उत्पादन हन्, लिबेरो पोजिसनकी सलिना पनि । महिला भलिबल खेलाडी उत्पादनमा न्यु डायमण्डको भुमिका समेत अतुलनिय रहेको छ । यस एकेडेमीले सलिना जस्तै अन्य धेरै खेलाडी जन्माएको छ जसले क्लबसँगै राष्ट्रिय टिमको बिडो समेत धान्दै आएको छ ।
सलिनाले भलिबल खेल्न थाल्दा उनी न्यु डायमण्ड एकेडेमीकै कक्षा ७ मा अध्ययनरत थिइन् । सानो कदकी सलिनालाई हौसला प्रदान गरि भलिबल खेल्न प्रेरित गर्ने र उनको खेलमा निखारपन ल्याउन नायकको भुमिकामा रहे न्यु डायमण्ड एकेडेमीका प्रिन्सिपल समेत रहेका प्रशिक्षक कुमार राई । उनै राई अहिले राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमको बन्द प्रक्षिणमा सहायक प्रशिक्षकको भुमिका समेत छन् ।
‘म कक्षा ७ मा पढ्दै गर्दा भलिबल खेल्न शुरु गरेकी हुँ । जतिखेर मेरो प्रेरणाको स्रोत हुनुन्थ्यो कुमार सर’,सलिनाले भनिन्,‘कुमार सरले नै मलाई भलिबल खेल्न सिकाउनु भयो र डिफेन्सबाट लिबेरो बनाउनु भयो । भलिबलबाट मैले जति पनि चर्चा कमाए त्यसको मुख्य श्रय कुमार सरलाई नै जान्छ ।’
सलिना नेपाली भलिबलमा कुमार राइको।निरन्तर प्रयास,मिहिनेत र लगनबाट निक्कै प्रभावित छिन् । उनी कुमार राइको प्रशिक्षणमा हुर्किएको गर्व गर्ने गर्छिन् ।
सलिनाले भन्नि,‘म मेरो जुनसुकै सफलतामा उहाँलाई सम्झने गर्छु । भाग्यवश अहिले पनि कुमार सरकै छत्र छाँयामा रहेर प्रशिक्षण लिने मौका जो पाएको छु, त्यसको सक्दो सदुपयोग गर्नेछु ।’
नेपालमा कुनै पनि खेलमा लाग्नु र तयसै प्रति डटेर लाग्नु सम्भवत कुनै पनि अभिभावकलाई स्विकार्य हुँदैन । नहोस् पनि किन रु पढेर राम्रो गर्छु भन्ने अब्बल विद्यार्ठी समेत देशमा रोजगारीको लागि भौतारिरहनु परेको अवस्थामा खेलेर कुनै भविष्य छैन भन्ने यथार्थले अभिभावकमा आफ्नो सन्तान खेल क्षेत्रमा आकर्षित भएको नरुचाउँनु स्वभाविक नै हो । यसलाई पुरातन सोच भन्ने कि अभिभावकको डर अथवा खेल क्षेत्रले आम समाजमा देखाउन नसकेको सपना ।
जे सुकै भएपनि अहिले पनि खेल क्षेत्रलाई कसैले पनि पूर्णकालिन रुपमा लगाउने वातावरण भने नेपालमा छैन नै । यसैको चपेटामा सलिना पनि परिन् तर विस्तारै आफ्नो मिहिनेत र नतिजाले अभिभावकको डरमाथि जित हासिल गरिन् ।
शुरुका दिनमा त उनलाई पनि घरबाट भलिबल खेलमा लाग्न पूर्ण स्विकृति थिएन । खेलमा भन्दा पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर भन्ने बुबा आमाको सोच विपरित सलिनाले भलिबल खेल्न थालेकि हुन् । उनको त्यो खेलप्रतिको लगाव भने खेर गएन र अहिले उनकै बुबा र आमा छोरीले भलिबलमा गरेको प्रगतिको ठूलो प्रशंसक बनेका छन् ।
‘शुरुमा त भलिबल खेल्न होइन पढाइ बाहेक अन्य कुनै कुरामा बरालिने होइन भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो नि । अझ भलिबल खेलाडी नै बन्छु भनेको भए त कति गाली खाइन्थ्यो खाइन्थ्यो तर विस्तारै मैले भलिबलमा मिहिनेत गर्दे जाँदा नाम बन्दै गएको देखेपछि घरमा सपोर्ट पाउँदै गएकी हुँ’,सलिना भन्छिन् ।
परिवारसहित काठमाडौंस्थित नैकापमा बसोबास गर्दै आएकी २३ वर्षिया सलिना परिवारकी कान्छी सन्तान हुन् । बिबिएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत सलिनाको परिवारमा बुबा र आमाबाहेक एक जना दाइ पनि छन् ।
स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म अझै केहि वर्ष भलिबल खेल्ने सोचमा रहेकि सलिनालाई यो नौ वर्षको अवधिमा विभागिय टिम एपिएफबाट प्रस्ताव समेत आएको थियो । तर, सानै उमेरबाट न्यु डायमण्डबाट खेलेकी सलिनाले विभागिय क्लबमाथि न्यु डायमण्डको मायाले जितेको भन्दै एपीएफको प्रस्ताव अस्विकार गरिन् ।
विभागिय क्लबबाट केहि हदसम्म भएपनि खेलाडीले आम्दानी गर्दै आएको छ, त्यो अवसर सलिनाले किन स्विकार नगरेको भन्ने मेरोखेल डटकमको प्रश्नमा भनिन्, ‘विभागिय क्लबमा मेरो रुचि नै छैन, सानैदेखी न्यु डायमण्ड बाटै भलिबल सिकेर त्यहिबाट खेल्दै आएको छु र यो अवस्थामा आएर न्यु डायमण्ड क्लब छोड्न उपयुक्त लागेन त्यसैले म एपिएफ गइन।’
सलिनाले अहिलेसम्म खेलेको खेलहरु:
न्यु डायमण्ड एकेडेमीबाट धेरै घरेलु प्रतियोगितहरु खेलेकी सलिनाले देशका लागि भने हालसम्म ९ अन्तराष्ट्रिय खेल खेलेकी छिन् । सलिनाले बंगलादेशको ढाकामा २०७६ साल कार्तिकमा भएको प्रथम एशियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल चयाम्पियनसिपबाट नेपालबाट डेब्यु गरेकी हुन् ।
सो प्रतियोगिताको फाइनलमा माल्दिभ्सलाई ३–० को सोझो सेटमा हराउँदै नेपालले ऐतिहासिक उपाधि जित्दा सलिना महत्वपूर्ण भूमिकामा थिइन् । सो प्रतियोगितामा ५ खेल खेलेकी सलिनाले उत्कृष्ट डिफेन्सको उपाधि जितेकी थिइन् ।
त्यसलगत्तै २०७६ साल मंसिरमा घरेलु भूमिमा सम्पन्न १६ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद ९साग०मा समेत उनको प्रदर्शन तारिफयोग्य रहेको थियो । १३ औं सागमा नेपाली महिला भलिबल टिमले फाइनलमा भारतसँग पराजित हुँदै रजत पदक हात पारेको थियो ।
सागमा सानी सलिनाले ४ खेल खेलेकी थिइन् । होचो कदकी सलिनाको सागको चार वटै खेलको प्रदर्शन उच्च थियो । सोहि वर्ष फागुनमा नेपालगंजमा भएको छैंठौ संस्करणको प्रधानमन्त्री कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण महिला भलिबल प्रतियोगिता खेलेकी सलिनाले प्रतियोगिताकै उत्कुष्ट लिबेरोको उपाधि समेत जितेकी थिइन् ।
त्यसयता उनले गत माघमा पोखरामा भएको टाइगर कप आमन्त्रित राष्ट्रिय क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप र फागुनमा नेपालगंजमा भएको सातौं संस्करणको प्रधानमन्त्री महिला भलिबल खेलिसकेकी छिन् ।
यस्तै गत चैतमा राजधानीमा सम्पन्न पाँचौ आरबिबि एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष लिग भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फको उपाधि न्यु डायमण्डले जित्दा उत्कृष्ट लिबेरोको उपाधि जितेकी थिइन् ।
यसैगरी उनले यहि बैशाखमा तातोपानिमा सम्पन्न भोटेकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष कप राष्ट्रिय महिला भलिबल समेत खेलेकि थिइन् । यस्ता थुप्रै घरेलु प्रतियोगिता खेलेकी सलिनाले धेरै पटक उत्कृष्ट लिबेरोको उपाधि समेत जितिसकेकी छिन् ।
सलिनाको अबको योजना:
स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म अबको केहि वर्ष अझै भलिबल खेल्ने योजनामा रहेकि सलिना विस्तारै आफ्नो भविष्यको बारेमा चिन्तित बन्ने थालेकी छिन् ।
‘सँधै खेलेरै मात्र जिवन निर्वाह गर्छु भन्दा त्यो सम्भव छैन, स्वास्थ्यले पनि साथ दिँदैन, सलिनाले भनिन्,‘स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म अबको केहि वर्ष अझै भलिबल खेल्छु, त्यसपछि भने कुनै व्यवस्थित किसिमको जागिर खाएर भविष्य सेटल गर्ने योजनामा छु ।’
अहिदले त सलिनालाई केहि विवाहका प्रस्ताव समेत आउन शुरु भइसकेको छ । बुबा आमाले भविष्य र विवाहको बारेमा पनि सोध्न थालिसक्नु भएको सलिना बताउँछिन् ।
तर सलिनाले आफ्नो मष्तिष्कमा भविष्यको योजना सफासँग कोरि नसकेकोले पढाए सक्काउने र दुर्गामी योजना बनाउने बताइन् ।
मलाई थाहाँ छ पढाई निके महत्वपूर्ण छ र अब भविष्यको बारेमा योजना बनाउन ढिलो गर्न हुन्न र म सुखी जिवन बनाउन अघि बढ्नै पर्छ’,सलिना भन्छिन्,‘अब खेल्ने भनेको बढीमा ६–७ वर्ष त होला तर त्यसपछि के त भन्ने प्रश्नको उत्तर मनमा छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस् : नेपाली भलिबलमा उदाउँदो दोश्रो “प्रतिभा माली”
Previous Postउरुग्वे उपविजेता बन्दै कोपा अमेरिकाको क्वाटरफाइनलमाPrevious Post
Next Postकोपा अमेरिका अन्तिम आठमा भिड्दैछन् यी टिमहरुNext Post
पीएसजीलाई हराउँदै लिलले जित्यो फ्रेन्च सुपर कप
Home>फिचर समाचार>होची तर प्रभावशाली ‘सलिना’